Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Ukuphuma Cindezela Izindaba, Wellness Imininingwane Yezidakamizwa Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Izilwane Ezifuywayo Izindaba Inkampani, The Checkout Imfundo Yezempilo Inkampani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ukuphila Kahle Umphakathi, Ukuphila Kahle
Izindlela eziyi-8 zokwelapha ukungezwani komzimba ngezikhathi ezithile zonyaka
Uma uhogela ungami, ufuna ukukhululeka kokungezwani komzimba, futhi ngokushesha! Hlanganisa la makhambi emvelo okwaliwa yizikhathi ezithile nemithi ukuze uzizwe ungcono ngokushesha.
I-ADHD yabantu abadala ingathinta impumelelo emsebenzini nenjabulo ekhaya. Isazi sezengqondo sichaza izisekelo zemithi yabantu abadala ye-ADHD nezindlela zokwelashwa.
Imithi ye-ADHD nezingane
Imininingwane ngemithi ejwayelekile ye-ADHD, ukuthi yenzani, isetshenziswa kanjani, indlela yokulawula imiphumela emibi, kanye namathiphu okuphathwa kahle kwemithi ye-ADHD.
Yebo, ungakhula ukungezwani komzimba nomuntu omdala
Ukwelashwa kwemvelo nokudla kungakhula kamuva empilweni. Nakhu ukuthi ungaphatha kanjani ukungezwani komzimba kwabantu abadala noma nini lapho behluma.
6 Izinganekwane ze-ADHD nemibono eyiphutha
I-ADHD ingesinye sezimo ezivame kakhulu ze-neurodevelopmental ezinganeni, futhi singenye engaqondakali kakhulu. Phikisa lezi zinganekwane ze-ADHD ngamaqiniso we-ADHD.
Kuphephile ukuhlanganisa utshwala ne-insulin?
Uma usebenzisa i-insulin ukuphatha isifo sakho sikashukela, ungaqhubeka nokujabulela isiphuzo esinotshwala ngezikhathi ezithile. Kodwa khuluma nodokotela wakho ukuze uhlale uphephile.
Kuphephile yini ukuxuba utshwala nemithi yesilungulela?
Utshwala bungabangela isilungulela, kepha kuphephile yini ukuxuba ama-antacids notshwala? Funda kabanzi ngokusebenzisana phakathi kwemithi yesilungulela njengePepcid notshwala.
Ingabe kuphephile ukuphuza utshwala ngenkathi uthatha izinsiza zokulala kadokotela?
Kwenzekani uma uxuba amaphilisi otshwala nawokulala? Ungayeka ukuphefumula. Ambien notshwala kungakubulala. Funda kabanzi nge-cocktail eyingozi lapha.
Kuphephile yini ukuphuza umuthi olwa nokukhathazeka ngotshwala?
Wake wajaha iXanax ngengilazi yewayini? Kuzwakala kuvamile, kepha kunezingozi eziphezulu lapho uxuba utshwala ne-benzodiazepines.
Kuya ngesimo. Kuphephile ukuphuza imithi eminingi — kodwa hhayi yonke — lapho uncelisa. Ucwaningo ngotshwala nokuncelisa ibele luyaphikisana.
Ingabe kufanele ulinde kuze kube yilapho ama-antibiotics akho ephela ukuthola isiphuzo esidakayo? Ochwepheshe bethu bachaza okufanele ukwazi ngama-antibiotic notshwala.
Kukhona ukunyuka okukhulu kokuhlaselwa yi-allergies kanye ne-asthma lapho izingane zibuyela esikoleni. Gwema isipikha sangoSepthemba ngezimpawu ngalezi zixwayiso.
Amathiphu ama-5 okuphatha ukungezwani kokudla kwengane yakho nge-Halloween
Ukuphathwa kwe-Halloween kungaba yingozi ezinganeni ezinokungezwani komzimba nokudla. Sebenzisa lawa macebiso — kusuka koswidi abangenakho ukungezwani komzimba namathanga wetiye — ukuthola iholide eliphephile.
Umhlahlandlela wakho wokuthatha imithi yokungezwani komzimba ngenkathi ukhulelwe
Ukukhulelwa kungenza izimpawu zokungezwani komzimba zibe zimbi kakhulu, kepha akuphephile ukuthatha noma imuphi umuthi wokungezwani komzimba lapho ukhulelwe. Zama amakhambi emvelo kuqala, bese usebenzisa lezi zinketho.
Kuhlolwa nini ingane yakho
Cishe uhhafu wazo zonke izingane zesikole uzwela kuma-allergen ajwayelekile, kepha izingane ezihlola ukungezwani komzimba akudingekile ngaso sonke isikhathi. Funda ukuthi ungahlolwa nini, kanjani, futhi ubani.
Ingabe i-allergy shots iyasebenza? Ingabe zikufanele?
Njengoba inikezwe ngaphezulu kweminyaka engu-3-5 njalo ngeviki, ama-allergy shots adinga ukuzibophezela kwesikhathi. Kodwa-ke, zingasebenza ngempumelelo engafika ku-85%. Kala okuhle nokubi lapha.
I-Anorexia vs. bulimia: Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Uyini umehluko phakathi kwe-Anorexia vs. bulimia? Qhathanisa umehluko ekuxilongweni, ekwelashweni, nasekuvinjelweni kwe-anorexia ne-bulimia.
Imithi elwa namagciwane engu-8 edala uC
Abantu banikezwa imishanguzo ebanzi yokulwa namagciwane njengokuhlasela kokuqala lapho begula. Kepha, kungabenza bagule kakhulu, lapho izimbungulu ezinjengoC. Diff zihlasela.
Yini omama abahlengikazi abadinga ukuyazi ngama-anti-depressants nokuncelisa
Kubalulekile ukuthi omama abahlengikazi abathola izimpawu zokucindezeleka bafune ukwelashwa — nakhu okufanele bakwazi uma bebekwa emithini.
Ungayiphuza kanjani ngokuphepha i-antibiotics ngesikhathi sokukhulelwa
Izinzuzo zokuthatha ama-antibiotic ngesikhathi sokukhulelwa zidlula izingozi zokungenwa yizifo ezingalashwa. Nawa amanye ama-antibiotic aphephile ngesikhathi sokukhulelwa.
yiluphi uhla olujwayelekile lwe-glucose yegazi?
kusiza ngani uviniga we-apula cider
i-melatonin ingadala ukuhlolwa kwezidakamizwa okungelona iqiniso
kubiza malini ukuvakashelwa okuphuthumayo ngaphandle komshwalense
umuthi ongcono womphimbo obandayo nobuhlungu